Ny fahasalaman'ny vehivavy dia mety hahazo komisiona amin'ny alàlan'ity rohy eto amin'ity pejy ity, saingy ny vokatra inoantsika ihany no asehonay. Maninona no matoky anay? Raha resaka lamaody no resahina, dia tonga toy ny rivotra ny satroka siny. Manomboka amin'ny satroka siny marika an'ny Britney Spears tamin'ny taona 90 ka mety kokoa ho fanomezana gimmick ao amin'ny ...
Ny fanaovana satroka dia toetra
Ny fanaovana satroka dia fihetsika iray Ao amin'ny hazakazaka Margaret Howell Spring / Summer 2020, nahita pataloha fotsy lava izahay, lobaka vita amin'ny voasarimakirana sy turquoise be loatra, parka maivana ary akanjo vita amin'ny boaty. Angamba izany ny toe-po, fa ny ba kiraro amin'ny pataloha tsy dia ratsy tarehy koa. Maro amin'izy ireo ...
Misafidiana satroka siny mpanjono arakaraka ny endrik'ilay endrikao
Misafidiana satroka siny mpanjono arakaraka ny endrik'ilay tarehy Ny satroka dia ampahany tena ilaina amin'ny fijery kanto, na inona na inona vanim-potoana. Raha ny resaka fisafidianana satroka ho an'ny vanim-potoana, heveriko fa tsy misy tsara kokoa noho ny satroky ny mpanarato? Tsy afaka alokaloka ihany, fa koa ea ...
Golf 2021 lohataona / lohataona amin'ny fomba fahavaratra: satroka tsara indrindra, mason'ny masoandro lalao
Vao haingana izahay no namoaka ny "Spring / Summer 2021 Style Guide", izay manasokajy ny fijery tsara indrindra ho an'ny fomba golf tsirairay (fanatanjahan-tena, fialam-boly, fanomanana sns.). Amin'ity herinandro ity dia miresaka satroka sy sarontava tarehy isika. Manome ny zava-drehetra izahay avy amin'ny satroka ray, satroka siny, satroka fitsangantsanganana, satroka tady, sns ...
andao hiresaka momba ny Sun Hat
Ny satroka masoandro tsara indrindra dia ny foto-tsakafo tsy dia miafina, ary ny vokany dia mihoatra lavitra noho ny endrika tianao. Manome fiarovana masoandro fanampiny izy ireo ary manakana ny taratra UV manimba amin'ny hoditra, maso ary volo. Ny ampahany tsara indrindra dia ny fanomezana endrika isan-karazany, noho izany tsy mila miroboka amin'ny ...
Nanamboatra fivarotana tany Oxford ireo mpamorona satroka Lady Gaga sy Brad Pitt
Ireo doka ireo dia ahafahan'ny orinasa eo an-toerana miavaka amin'ireo mpihaino kendreny (vondrom-piarahamonina eo an-toerana). Zava-dehibe ny hanohizantsika hampiroborobo ireo doka ireo, satria ny orinasanay eo an-toerana dia mila fanampiana faran'izay betsaka araka izay tratra amin'ity fotoana sarotra ity. Rojo HAT izay namorona akanjo ho an'ny Lady Gaga ...
Ny Collocation ho an'ny satroka
Ny Collocation an'ny satroka Ny collocation an'ny satroka dia tokony handinika ny volon-koditsika manokana. Ny lokon'ny satroka dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny lokon'ny hoditra, ohatra, ny olona manana hoditra hatsatra dia tsy mety mifidy satroka miloko mahafinaritra, ary misafidy fahadiovana ambany amin'ny satroka miloko afovoany. Ho an'ny fanadinana ...
Miaro ny hodi-doha any ivelany io satroka rano tsy misy rano io
Ny satroka Hydro Melin dia maivana ary mpiara-miasa tonga lafatra amin'ny hetsika ivelany rehetra. Rehefa miala sasatra eo akaikin'ny pisinina na eny amoron-dranomasina dia arovy ny lohanao amin'ny hafanana. Ary aza manahy fa hirodana afaka vanim-potoana iray, satria ny fitaovan'izy ireo dia avo lenta sy mateza avokoa! Ny dite ...
Ny iray amin'ireto satroka tsy mihinan-kena ireto dia mety hahatonga ny endrikao ho tonga lafatra kokoa
Na volo ratsy, andronao amin'ny masoandro, na sofina mangatsiaka ny andronao, dia mety ho endrika mahafatifaty sy azo ampiharina ny satroka. Fa ny habibiana mazava ho azy tsy misy mahafatifaty. Soa ihany fa misy satroka vegan isaky ny misy fotoana-nomenay tari-dalana ho an'ireo rehetra ireo ianao. Raha ny marina, misy satroka malaza kokoa noho ny baseball ca ...
Inona no loko satroka tsara indrindra amin'ny fahavaratra?
Inona no loko satroka tsara indrindra amin'ny fahavaratra? Amin'ny fahavaratra dia betsaka ny olona no te-hanao satroka, satria tsy vitan'ny hoe manatsara ny firaketan-damaody izy ireo, ary afaka mitondra ny vokarin'ny masoandro ihany koa. vokany tsara? Mena ...
Timothée Chalamet dia nanamafy fotsiny fa eo ny satroka siny
Izay manana volo misavoritaka toa ilay mpilalao sarimihetsika Timothée Chalamet 24 taona (Timothée Chalamet) dia mahalala fa indraindray tsy afaka fehezina ireo curl voajanahary ireo, ka manahirana kokoa ny fikirakirana ny loha-lohany. Matetika i Chalamet dia miantehitra amin'ny saron-doha hanafina ny vombony follicular tsy voafehy: nanao Elara Pictu ...
Fiofanana momba ny rafitra ERP Smart
(1) Manome rafitra fampahalalana mifangaro mba hahatsapa ny angon-drakitra sy ny fizarana vaovao. (2) Mandrindra sy manara-penitra ny fizotran'ny asa aman-draharaha, manafoana ny asan'ny duplicate amin'ny fikirakirana orinasa, manatratra ny fenitra sy ny fenitra ho an'ny fanodinana orinasa, manome fampidirana data, ary arb ...